Itekhnoloji yesiGaba seCDN elandelayo imalunga nokuGcina nje i-Caching | Martech Zone
Kwihlabathi lanamhlanje elixhumeke kwi-hyper, abasebenzisi abayi kwi-Intanethi, bahlala bekwi-Intanethi, kwaye iingcali zentengiso zifuna itekhnoloji entsha yokuhambisa amava abathengi asemgangathweni. Ngenxa yoku, uninzi sele luqhelene neenkonzo zakudala zefayile ye- yomxholo wenethiwekhi (CDN), enjenge-caching. Kulabo abangaqhelananga neeCDN, oku kwenziwa ngokugcina okwethutyana ukuphindaphinda okubhaliweyo, imifanekiso, iaudiyo kunye nevidiyo kwiiseva, ukuze kwixesha elizayo xa umsebenzisi eza kufikelela kulo mxholo, uya kusiwa ngokukhawuleza kunokuba ayigcinwanga.
Kodwa lo ngumzekelo omnye osisiseko wento iCDN inikezela ngayo. Abathengisi basebenzisa isizukulwana esilandelayo seCDNs ngeendlela ngeendlela zokunxibelelana nabaphulaphuli kunye noloyiso kwimiceli mngeni yokubonelela ngamava wabathengi angenamthungo kwizixhobo ezininzi, unxibelelwano olwahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kwewebhu okunzima ngakumbi.
Nantsi eminye imisebenzi ephambili eyilelwe ukuphucula amava abathengi:
Icala lokuphendula kwiseva (RESS)
Ukongeza kumaxesha amafutshane okulayisha, ukwandisa ubukho bakho bewebhu kwizixhobo ezahlukeneyo kuyimfuneko enkulu yokwenza amava omthengi amahle. Sebenzisa uyilo lwewebhu oluphendulayo (RWD) kunokuba yindlela esebenzayo yokunceda ukwenza oku. Umzekelo, i-RWD iqinisekisa ukuba xa umhambeli weselfowuni okanye ithebhulethi etyelela iwebhusayithi, imifanekiso iyamanzi kwaye ezinye iiasethi zilinganiswe ngokufanelekileyo, ke abasebenzisi abazami kuhamba kwinguqulelo yewebhusayithi ngokucofa kunye nokusondeza. Nangona kunjalo, i-RWD inecala elisezantsi lokuba inokuthi ikwazi ukukhuphela ngaphezulu kuba ithumela imifanekiso efanayo kunye ne-HTML kwisixhobo esiphathwayo esithumela kwidesktop. Sebenzisa i-RWD eneempawu zedatha yeendawo ezinokuthi zilungelelanise owona mxholo uhanjisiweyo kumaqela ezixhobo kwaye unciphise ngokuphawulekayo ubungakanani bephepha lokukhuphela kunye nokwandisa ukusebenza.
Ukucinezelwa komfanekiso oguqukayo
Ngelixa i-RWD iza kuyenza imifanekiso ibe lulwelo ukuze ilingane ngokufanelekileyo ngokusekwe kubungakanani bescreen sefowuni, isazakusebenzisa umfanekiso wesayizi ofanayo njengoko kubonisiwe kwidesktop. Oku kunokuthetha ukuba abasebenzisi bakho kwi-3G ecothayo okanye kwinethiwekhi ephezulu yokuhamba kade bayacelwa ukuba bakhuphele umfanekiso onama-megabytes aliqela kuphela ukuze ubabonise kubo kufutshane nobukhulu besitampu. Isisombululo kukuthumela umsebenzisi kuphela ubungakanani bomfanekiso ofanelekileyo kwiimeko zabo zenethiwekhi zangoku. Ukucinezelwa komfanekiso oguqukayo ukufezekisa oku ngokuthathela ingqalelo unxibelelwano lwangoku lwenethiwekhi, ukubambezeleka kunye nesixhobo emva koko ucinezele umfanekiso ngexesha lokwenyani ukubonelela ngolungelelwano phakathi komgangatho womfanekiso kunye nexesha lokukhuphela ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi banokufikelela kwimifanekiso ekumgangatho ophezulu ngaphandle kokubandezeleka ekusebenzeni kancinci. .
I-EdgeStart -Khawulezisa ixesha ukuya kwi-byte yokuqala
Ukubeka ngokulula, ukuba ugcina umxholo kuphela, uphulukana nezibonelelo ezininzi zendlela yeqonga ekrelekrele. Abathengisi kufuneka babenolwazi kunye nokufuna itekhnoloji njengabathengi babo ukuba bafuna ukuphumelela. Kwaye ukuba oku kubonakala ngathi kuyinkqubo eyoyikisayo, akufuneki kube njalo. Kukho iingcali ezikhoyo zokukukhokela kwiinkonzo ezifanelekileyo ezihambelana nenkampani yakho kunye neemfuno zabasebenzisi bakho.
tags: akamaiedgestartisiphelo sangaphambili sokusebenzaisantya sephephaicala lokuphendula kwisevaii-resisantya sendawoisantya